Faallo: QALBIDHAGAX: Kaba Dhig Siday U Sheegayaan inay tahay,!!!!!!!! – Hornafrik Media Network
Qalbi Dhagax waxaa dhiibtay dawladda Soomaaliyeed, waxaana loo dhiibay Xabashi uu magac dawlad Soomaaliyeed ku la diriray, ka dibna uu ku la dirirayey magac urur GOBONNIMODOON iyo XORNIMO U DIRIR AH!
Go’aanka golaha wasiirrada waxaa ku jira, saddax qodob oo ka la daran; (1) HAFARYO (2) XEERJEBIN (3) AXDI CAALAMI DHAWRID LA’AAN!
Haddaba, ha la dhiibee, maxaa lagu dhigay dhaqangelinta dhiibiddiisa? Aamusnaan toban maalin ka dib ah, waxaa la la shiryimid, in dhiibiddiisa loo cuskaday heshiis Mahad Salaad iyo Cabdikariin Guuleed ka la saxiixeen 2015,2016.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhexwaday geyiga Soomaaliya iyo mandaqadda. maxay ahaayeen falalkaa? Qarxin? Qaarijin? Shirqoolid? Qixin? Qalqal abuurid?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhexwaday. Degaankee? Tuuladee? Magaaladee? Gobolkee? Maamulkee?
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxaha aragagixisada ee Alshabaab. Horta “kooxaha” ma ahane, ee waa “kooxda” Alshabaab. Alshabaab waa mid, ee wax badan ma ahan. Hore wadar inta ku adeegsato, dib keli ka ma adeegsan kartid, ee qoloda u qortay warsaxaafadeedka waxaan dhihi lahaa; AFKA HA LA BARO!
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxda aragagixisada ee Al-Shabaab. Goorma ayuu iskaashi dhaw la yeeshay? Sidee/qaabkee ayuu iskaashi dhaw u la yeeshay? Meelehee iskaashi dhaw ku la yeeshay? Ha la caddeeyo.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxda aragagixisada ee Al-Shabaab, haddaba, maxaan loo saarin maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida, oo qaabilsan maxkamadaynta qof iyo qolo walba, oo looga shakiyo ama lagu helo shabaabnimo ama kalkaalid Shabaab?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxda aragagixisada ee Al-Shabaab, haddaba, maxaan loogu maxkamadayn dalka gudihiisa, ee ah meesha uu iskaashiga dhaw ku la yeeshay Alshabaab?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxda aragagixisada ee Al-Shabaab. Sida ay sheegeen madax ka tirssan sirdoonka iyo dawladda tii hore iyo tanba, Qalbi Dhagax wuxuu Muqdisho ku noolaa saddaxdii gu’ ee la soo dhaafay, haddaba, haddii Qalbi Dhagax uu yahay kaaliye Shabaab, maxaysan sirdoonku wax uga qaban? Sidoo kale, maxaysan madaxda dawladdu tallaabo uga qaadin? Saw ma noqonayso, in ay bulshada ku sii dhexdaayeen qof qatar ku ah amniga dalka iyo gobolka? Saw ma ahan, madaxdaa sirdoon iyo dawladeed, in lagu maxkamadeeyo, qarin xaqiiqo iyo fulin la’aan sharci?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu iskaashi dhow la lahaa kooxda aragagixisada ee Al-Shabaab. Haddaba, dawladdu, meeqa qof oo argagixso ah ayey heysaa, Xamarna ay ka dejisay guryo? Maxay ku ka la duwan yihiin, oo midna loo dhiibay, kan kalana hooy Soomaaliya looga siiyey ama dibadda?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax uu ka tirsanaa ONLF oo argagixiso ah! Goorma ayey ONLF noqotay argagixiso? Falkee ayey ku noqotay? Xeerkee ku noqotay? Ma deer MQ, Maraykanka, Midawyada Yurub, Carabta iyo Afrika, mise, hadaaq hanfade?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskii 07dii Juun 2015kii iyo heshiikii 2dii May ee 2016 oo tilmaamaya in dhan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda. Heshiiska xaggee kaga taal dad dhoofin iyo maxaabiis dhiibid?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba heshiiska maxaa keenay, oo sababay? Xasuuqii mooryaanta Cabdi Ileey iyo Liyuu Boolis, oo lana nabadgalay.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba heshiisku ma wuxuu ahaa, heshiis labo dawladeed u dhexeeyey, mise, heshiis DHIIG JOOJIN ah?
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, weli ma aragteen heshiis labo dawlo qabanaya, oo aan lahayn borotokool, astaan, summad dawladeed, tixraac iyo jaantus, ee lagu saxiixo warqad ka maran intan sare oo dhan?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, heshiis hal qof soo galay, bulsho iyo dawlad ma qabtaa? Ka muhumsae, horta yuu metelayey? Ma dawladda, mise, beesha uu ka dhashay? Haddaad tan la yaabban tahay, dawladdan Farmaajo ayey eheed, tii wasiirrada shirarka uga reebaysay beel hebel ayaad ka dhalatay. Xasuuso kii Sacuudiga iyo kii Qaahira.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, saxiixidda heshiiska ka dib, miyaa la horgeeyey golaha wasiirrada oo ay ansixiyeen, maadaama hal wasiir uu soo saxiixay?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, saxiixidda heshiiska iyo ansixinta golaha wasiirrada ka dib, miyaa la horgeeyey golaha baarlamaanka, oo ay ansixiyeen?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, saxiixidda heshiiska, ansixinta golaha wasiirrada iyo golaha baarlamaanka ka dib, miyaa la horgeeyey madaxweynaha oo uu saxiixay?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, saxiixidda heshiiska, ansixinta golaha wasiirrada iyo golaha baarlamaanka ka dib, miyaa la horgeeyey madaxweynaha oo uu saxiixay, ka dibna lagu baahiyey; FAAFINTA RASMIGA AH EE DAWLADDA?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, sida ku cad qodobka 36aad, faqradiisa 1aad iyo 2aad ee Dastuurka KMG arrinta isu-celinta eedaysaneyaasha iyo danbiileyaasha waxay ku imaan kartaa oo kaliya heshiis Dowladda Federaalka Soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowlada Soomaaliya isu-celinta eedaysanaha iyo danbiilaha. Sharciga lagu maamaulayo isucelinta dembiileyaasha waxaa soo saaraya Barlamaanka Federaalka. Sharcigaas illaa hadda la ma samayn, ka sokow, qodobkan la ma tixgelin.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, sidoo kale, sida ku cad qodobka 37aad, faqradiisa 1aad ee Dastuurka KMG iska dhaaf muwaadin Soomaali ahe xitaa qofka ajnabiga ah ee qaxootinnimo ku soo gala Jamhuuriyadda Soomaaliya dib looguma celin karo dalkii uu ka yimid, haddii ay jirto cabsi muuqata inuu la kulmayo ciqaab! Qodobkan la ma tixgelin.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba, miyeysan jirin heshiisyo la mid ah, oo maamullada dalku la galeen Itoobiya, maxaa kan kaligiis loo cuskaday, oo looga xushay waxa heshiis Xabashi la la galay, anaga oo og, in ay jiraan maamullo ku hoyda kelinka shanaad iyo Itoobiya?.
KABA DHIG, in ay tahay sida ay u sheegeen, ee ah, in Qalbi Dhagax lagu dhiibay heshiiskaa, haddaba xeerkaa iyo dhiibidda Qalbi Dhagax waxay ka hor imaanayaan xeerarka UNHCR iyo geneve convention.
Ugu dambayn, waxaa idiin caddaatay, in ay taladaa intii soo jeedisay, intii wax ka ogeed iyo intii taageertay aysan maamul wax ka aqoon, maarayn wax ka ogayn, dawladnimo dareenkeed lahayn, dadnimana wax ka gelin.
Laashinkii weynaa iyo abwaankii murtida macaanaa, ee Asbhir Nuur Faarax (Bacadle) Eebbe ha u raxmadee, ayaa berigii xertii XABASHIDA 2006-2009, wuxuu ku shirbay, meerisyadan sooyaalka galay, oo aadba mooddo, in laashinku uu ka hadlayo, go’aankii golaha wasiirrada;
“Abuur Itoobiyaan arkaa
Taariikh madoobe aan tirmayn
Tacbane Tigree ey u taal,
Wixi wacaaya wiil Amxaar
Wallaahi waa la weel duwaa,
Hadday Tigree tanaadsandeen
Inaan ka tashanneey tegee!”
W.Q: Bashiir Maxamad Xirsi